बाल्यकालमा केपी ओली कस्ता थिए ? – News Portal of Global Nepali
7:56 PM | 1:41 AM
(160723) -- KATHMANDU, July 23, 2016 (Xinhua) -- Nepalese Prime Minister KP Sharma Oli(C) arrives during the discussion of the no-confidence motion filed against Prime Minister in the parliament in Kathmandu, Nepal, July 22, 2016. Nepal government led by KP Sharma Oli has fallen under minority on Friday after the no-confidence motion was registered in the Parliament against him. (Xinhua/Sunil Sharma)(yy)
नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली ठ्ट्यौली पारामा गम्भीर कुरा गरिरहेका हुन्छन् । कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली बोल्दा उखान टुक्का र हास्य प्रसँग जोड्ने गर्छन्, जस सहभागीलाई मनोरञ्जनसहितको खुराक दिएको हुन्छ । अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला बोलेका कुरा अहिलेसम्म चर्चाको विषय बनेको छ । रमाइलो पारामा प्रस्तुत हुने अध्यक्ष ओली बाल्यकालमा कस्ता थिए धेरैलाई चासो हुनसक्छ । उनी पहाड घरबाट तराई झरेपछि केही समय दमक–१७ मा बसेका थिए । झापामा उनले पहाड घर तेह्रथुमका छिमेकी इङनाम परिवारमा केही समय बिताए । त्यसबेला इङनाम परिवारकी छोरी शिवरुपा इङनाम (आङवोहाङ) सात वर्षकी थिइन् । यो त्यस्तै १८–१९ सालतिरको कुरा हो, शिवरुपाले केपी ओलीबारे विगत सम्झदै यसरी बोलिविस्तार लगाइन–
झोडा फाँडेर अहिलेको दमक–१७ मा दाजुहरु बस्नु हुन्थ्यो । माइला दाजुको विवाह भए पनि भाउजु तराईमा बस्न मान्नु भएन । त्यसैले खाना बनाउन र घरधन्दा सघाउन मलाई दाजुहरुले पहाडबाट तराई ल्याउनु भयो ।
सम्भवतः म त्यसबेला छ–सात वर्षकी हुनुपर्छ । १३ सालमा जन्मेकी हुँ । दाजुहरुसँगै बस्नका लागि केपी दाजु पनि आउनुभयो । उहाँ हाम्रै घरमा बस्नु हुन्थ्यो । दाजुहरुसँगै खेती किसानी काम सहयोग गर्नुहुन्थ्यो । भर्खर झोडा फाँडनी हुँदै थियो । घरमा १७–१८ वटा बाख्रा, एउटा भैसी, हल गोरु, सुगुरपाठालगायत थिए । म सानी फुच्ची भए पनि छुच्ची टाइपकी थिएँ । खाना पकाउने र बाख्रा चराउने मेरो डिउटी थियो ।
दाइहरुलाई काम लगाउने, काम गरेन भने गाली गर्थे । गाली मात्र होइन, भरे भात पाउँदैनस्, मासु पकाएको दिन बोसो मात्रै पाउलास् भन्दिन्थे । केपी दाजु अली अल्छे र स्वादे टाइपको हुनुहुन्थ्यो । जे भए पनि अरु दाजुहरुको अगाडि केपी दाजुलाई केही भन्न सक्दिन थिएँ, तर एक्लै भएका बेला उहाँलाई गोबर सोर्न, गाई वस्तुलाई कुँडो दिन र घाँस काट्न अह्राउँथे । उहाँ हत्तपत्त मेरा कुरा टेर्नु हुँदैन थियो । त्यत्ति बेला उहाँलाई पनि भरे भात पाउँदैनस् । मासु बिनाको भात खालास् भन्दै गाली गर्थे ।
एउटा घटना चाहिँ अहिले पनि सम्झिन्छु । संयोग पनि त्यस्तै परेछ । घरमा दुई तिन किसिमको शिकार पकाएकी थिएँ । त्यो दिन केपी दाजुले मैले अह्राएको काम गर्नु भएनछ । मलाई रिस उठिरहेको थियो । बेलुकी खाना खाने बेलामा उहाँलाई बोसै बोसो भएको मासु हालिदिएँ । उहाँले टुलुटुलु त्यही मासु पकाएको कराइमा हेरिरहनु भयो । असाध्य माया लाग्यो, पछि छानी छानी राम्रो मासु हालिदिएँ । भान्सामा खाना बस्दा पनि यो छैन, त्यो छैन भनेर सोधि राख्नु हुन्थ्थो, म झर्केर छैन भन्थे । दाजुहरु भएका बेला म केही बोल्न सक्दिन थिएँ । एक्लै भएका मौका पारेर काम अह्राउने र गाली गर्न मलाई खुब मज्जा लाग्थ्यो ।
हाम्रो समुदायमा तपाई हजुर भन्ने चलन थिए, अझै पनि जी हजुरको चलन हामीकहाँ छैन । केपी दाजुसँग पनि तँ तँ र म म बाटै कुराकानी हुन्थ्यो । मेरो छुच्ची स्वभाव भए पनि उहाँले बहिनी भनेर माया गर्नु हुन्थ्यो । उहाँको व्यवहार औधी मन पथ्र्यो । मासु पकाएको भाँडालाई घाँटी तन्काएर हेरोस् भनेरै म सुरुमा उहाँलाई थोरै मासु दिन्थे । उहाँ मासुको सौखिन हुनुहुन्थ्यो ।
मोइ पारेको दिन घिउ खान पाइन्थ्यो । घिउ बेच्न लैजानुपर्ने भएकाले एक चम्चाभन्दा बढी कसैलाई दिइदैन थियो । केपी दाइ घिउ, दही दूध भन्दा पनि मासु मन पराउनु हुन्थ्यो । क्षेत्री बाहुनले सुँगुर खाँदैन भनेको सुनेकी थिएँ, तर उहाँ जुनसुकै खानेकुरा संकोच नमानी खानुहुन्थ्यो ।
कृषकको घर भएकाले सबै काम गर्नुपथ्र्यो । हलो जोत्ने, आली लगाउने, घाँस काट्ने, बाख्रा वस्तु हेर्नुपथ्र्यो । केपी दाइले पनि हाम्रा दाइसँगसँगै काम गर्नु हुन्थ्यो ।
म सानै भएकाले केपी दाइ कसरी त्यहाँ आइपुग्नुभो, मलाई केही थाहा छैन । त्यहाँ अर्का एकजना काकाको छोरा पनि थिए । हाम्रो पहाड घर सँगै भएकाले केपी दाइ पनि त्यहाँ आउनु भएको सुनेकी मात्र हुँ । मलाई स्कुल पढाएनन्, त्यसैले सबै कुरा जान्ने बुझ्न सकिनँ । केही रमाइलो सम्झना मात्र बाँकी छ ।
दाजुहरुले केही खर्चपानी दिएपछि केपी दाइ त्यहाँबाट हिड्नु भएको मलाई थाहा छ । कहाँ जानुभो, कता जानुभो मलाई केही थाहा भएन । तर म १३ वर्षकी हुँदा एक दिन दमकको घरमा टुप्लुक्क आइपुग्नुभो । त्यसबेला केपी दाइलाई बाल्यकालको व्यवहार गर्ने आँट मसँग थिएन । सम्हालिएर कुरा गर्थे, त्यसबेला केपी दाइ त्यत्ति धेरै समय बस्नु भएन ।
अहिले पनि बेला बेला केपी दाजुलाई भेट्न जान्छु । उहाँको निर्वाचन क्षेत्र हामी बसोबास गर्ने ठाउँ नै भएकाले उनी पनि आउनुहुन्छ । काठमाडौं आएको बेला केपी दाजुलाई भेट्न जान्छु, पुरानो कुरा सम्झाउँछु । विगत रमाइलो मानेर सुन्नु हुन्छ, खुशी लाग्छ ।
प्रस्तुतिः सुनयना राउत